बच्चाहरू बाहिर निस्केपछि - हिमपातको बेलामा सही व्यवहार
गोरखाको समयमा सही व्यवहार | शिक्षा
म एक बिरामीको समयमा कसरी ठीक व्यवहार गर्दछु?
हिमपातको समयमा व्यवहार: सर्वोत्तम बिन्दु कहिल्यै नबिर्सनुहोस्
पहाडहरूमा बर्फीलीको समयमा व्यवहार
सामान्य बालबालिकाको प्रश्न हरेक आमा या पिताले parenting को समयमा जवाफ दिनुपर्छ। बिजुली र थन्डर एक बृहस्पतिको सामान्य साइड इफेक्ट हुन्।
हामी सबैले बृहस्पतिको अनुभव गर्दछ - तर wमाथि उल्टो आउँदो रहेछ
म प्रायः त्यो वाक्यांशलाई मेरो छोरीलाई आश्वस्त पार्न एक लिटनी जस्तो प्रार्थना गर्दछु, जुन गर्मीमा बिरामीहरू नियमित रूपमा अनुभव गर्दछ।
हिमपातको समयमा उचित व्यवहारलाई थाहा छ!
तर बिजुली र गन्धले कहाँबाट आउँछ? साँच्चै? बिजुली मूलतः बिजुली निर्वासन भन्दा बढी छैन। गोरखाको आवाज लहरहरू हुन्छन् र बिजुलीको ध्वनिक निर्वहन हो।
तपाईं लगभग बिजुली, निर्वाह, एक थन्डरप्लेटको रूपमा सुन्नुहुन्छ। बिजुली र चोर कहाँबाट आयो? मूलतः बढी जस्तो हुनेछ: किन बिजुली र गोरखा छन्।
बिजुली र धुवाँको साथ बिग्रियो
गर्मीमा, सूर्यले नजिकैको नमीको हावालाई पुर्याउँछ। हल्का वायु बुलबुले उज्यालो हुँदा ऊ हल्का हो र त्यसपछि आकाशमा हिउँद वरिपरिका ठाउँहरू। यो प्रभारी विभाजन (चिसो / तातो )ले विद्युत् भोल्टेजको निर्माण गर्दछ, जुन, यदि टाढैनी र तुरन्त-गोरखाको साथ फ्लैशमा यो बलियो हुन्छ भने! - अनलोड गर्दछ।
बिजुली र चोर कहाँबाट आयो? त्यसैले यो स्पष्ट गरिनेछ। तिनीहरू उच्च अङ्कमा तनावको कारण हुन्। संयोगवश, यो बिजुली चार्ज सजिलै एक अरब वोल्ट सम्म पुग्छ। यदि फ्लैश डिस्चार्ज हुन्छ भने, 30,000 डिग्री सम्मको तापमान घट्न सक्छ। यो मोडमा हावा हटाउँदछ, जुन अत्यन्त छिटो विस्तार गर्दछ र त्यसपछि ध्वनि तरंगहरू उत्पन्न गर्छ।
विषयको जागरूकता बढाउन:
मौसमको विषयमा निःशुल्क रंगीन पृष्ठहरू
कहिले सोध्नुभयो: जहाँ बिजुली र थोरै आउँछत्यसैले एउटा भन्न को लागी दुवै पन्त अप को घटना हो र आकाश मा तनाव निर्वहन हो।
हिमपातको समयमा व्यवहार कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ जीवन र मृत्युको बारेमा निर्णय गर्दछ। विशेष गरी केटाकेटी जो बाहिर निस्कनु पर्छ त्यसैले यसैले आवश्यक महत्त्वपूर्ण नियमहरू महसुस गर्नुपर्छ। गोरखापत्र प्रायः एक आश्चर्यको रूपमा आउँछ, र बच्चाहरु लाई अक्सर समय मा घर जान्न को लागि भनिएको छ, यो हुन सक्छ कि उनि प्रतिक्रिया गर्न भन्दा तेज छ।
बिरामी हुँदा ठीकसँग व्यवहार गर्ने तरिका त्यहाँ छ? कुनै पनि अवस्थामा: शांत रहनुहोस्। चिन्तित बच्चाहरूको लागि यो सजिलो छैन। त्यसपछि नियम आफैलाई समर्थन हुन सक्छ हिमपातको बेला ठीकसँग व्यवहार गर्ने र पटक्कै भाग नदिनुहोस्।
बिजुली स्ट्राइकहरू प्रायः उच्च वातावरणमा उनीहरूको वातावरणमा अवस्थित छन्। त्यसैले सरल नियम सानो हुनु हो। क्षेत्रमा सर्वोच्च बिन्दु कहिल्यै नहोस्। खुला हावामा पृथक पेड, मिठाई, धातु बाड आदि बाट बचाउन आवश्यक छ।
तपाईंको बच्चाहरु राम्रो समय मा सूचित गरिरहेको समयमा उचित व्यवहारको बारेमा
वास्तविक हिमपातको समयमा व्यवहार त्यसोभए खाली क्षेत्रमा खोलिएको र स्क्वाट खोज्नु पर्दछ। फर्श कहिल्यै ठूलो आकारमा शरीर संग छुनु हुँदैन, खुट्टा स्क्वाट मा एकसाथ नजिक हुनुपर्दछ, हातहरू खुट्टाको छेउमा फाँटमा राख्नु पर्छ।
बिजुलीलाई हिँड्ने एक बिजुली, अर्थात् तल प्रवाह हुन्छ र यससँग तपाइँको कम से कम सम्पर्क छ।
दोस्रो बिन्दु: पानीबाट बच्नुहोस्! पानी बिजुली सञ्चालन गर्दछ। तालमा तैरँदा र टाउको सधैं उच्चतम बिन्दु हो! त्यसैले आवश्यक पर्वत, तालाब, धाराहरू आदिबाट बाहिर जानुहोस्। बच्चाहरूलाई जान्न आवश्यक छ कि उनीहरूलाई सबै पानीको लागि सुरक्षित दूरी चाहिन्छ। त्यो हो सही व्यवहार बृहस्पतिवार
तार रस्सीहरू ह्यान्ड्स र टाढाको बीचमा आश्रय खोज्नुहोस्। शरद ऋतुमा, बच्चाहरूले पनि आफ्नो पित्ताहरू फिर्ता लिनु पर्छ, किनभने तिनीहरू चाँडै उच्चतम बिन्दु हुन्थे - भित्ता अघि अघि पनी अझै पनि मोहक छ!
हिमपातको समयमा व्यवहार जंगलमा गाह्रो छ। यहाँ फ्लैशको लागि धेरै असर स्थानहरू छन्। फेरि, गहिरो पुनरुत्थान वा वन क्षेत्रहरू खोज्नुहोस् र तल झोक्नुहोस्, लामो रूखहरू जोगाउनुहोस् र साधारणतया रूखहरू अन्तर्गत आश्रय खोज्न नदिनुहोस्, अझ राम्रोसँग बचाव।
रंग पृष्ठ गरौं
बालबालिकाको लागि छोटो कथा - बृहस्पति
किशोरों मा जघन | शिक्षा
एक्जिमा बच्चाहरु मा
छोराछोरीमा रचनात्मकता बढाउनुहोस्
किन बालुवाटार? | बालबालिका र शिक्षा
मद्दत, मेरो बच्चा झूटो छ | शिक्षा
Godparents बप्तिस्मा हुनुहोस् शिक्षा बच्चाहरु